ယာဉ်တိုက်မူ ဖြစ်စဉ်များတွင် တိုက်ပြေး ယာဉ်မောင်းများ အမှုကျေအေးခွင့် မပြုတော့ ~ The ICT.com.mm Blog
ယာဉ်တိုက်မူ ဖြစ်စဉ်များတွင် တိုက်ပြေး ယာဉ်မောင်းများ အမှုကျေအေးခွင့် မပြုတော့
ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်စဉ်များတွင် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားခဲ့သည့် ယာဉ်မောင်းများအနေဖြင့် အမှုကျေအေးခွင့် တင်ရာတွင်လက်ခံတော့မည်မဟုတ်ပဲ ကျေအေးခွင့်ရရှိမည် မဟုတ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ မှဒုတိယရဲမှုးကြီး မြင့်အေးက အောက်တိုဘာ ၃၀ရက်ကပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်စဉ်၌ ဒဏ်ရာရရှိသူကို တာ၀န်သိစွာ နီးစပ်ရာဆေးရုံများသို့ ပို့ဆောင်ပေး သည့်ယာဉ်မောင်းများ အနေဖြင့် တရားရုံးတွင် ကျေအေးခွင့်ရရှိနိုင်ကြောင်း ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲမှုး ရဲမှုးကြီး ကျော်ထွေးက ပြောကြားခဲ့သည်။ အလားတူကားတိုက်ပြီး ထွက်ပြီးခဲ့သည့် ယာဉ်မောင်းများ အနေဖြင့် ကျူးလွန်ခဲ့သည့် ဥပဒေအတိုင်း ပြစ်ဒဏ်ခံရမည့် အပြင်လိုင်စင် ပိတ်သိမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ ယာဉ်မောင်းတွေ အများစုကလည်း ခရီးသည်တင်ယာဉ်မောင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီယာဉ်မောင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ တာ၀န်ရှိတဲ့သူတွေလည်း ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေ ၊ မှတ်တမ်းတွေကိုတိတိကျကျ မယူထားတဲ့ အတွက် ကျူးလွန်တဲ့သူကိုဖမ်းဆီးတဲ့ အခါမှာလည်းနှောင့်နှေးမှုတွေ ရှိပါတယ်။ တချို့ယာဉ်မောင်းတွေဆိုရင် လိုင်စင် မရှိပဲမောင်းနှင်းတာတွေရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီကို ယာဉ်တိုက်မှုတွေနဲ ပတ်သက်ပြီး ကျေအေးခွင့်တင်တဲ့အခါမှာ သေချာစစ်ဆေးနေတယ်။
တိုက်ပြေးယာဉ်မောင်း တွေကကျေးအေးခွင့်တင်လာရင်တော့ ထိရောက်စွာ အရေးယူဖို့ တရားရုံးကတာ၀န်ရှိသူတွေကို မှတ်ချက်ပေးသွားမယ့်အပြင်ကျေအေးခွင့် လုံး၀ပေးမှာလည်း မဟုတ်တော့ပါဘူး” ဟုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အရှေ့ပိုင်း ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုး ဒုတိယရဲမှုးကြီး မြင့်အေးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်တွင်း၌ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်စဉ် ၉၇၆၂ မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာရရှိသူ ၁၇၃၇၉ ဦးရှိခဲ့ကာ သေဆုံးသူ ၂၈၁၁ဦး ၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်စဉ် ၁၁၆၄၉ မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာရရှိသူ ၁၉၇၂၆ ဦးရှိခဲ့ကာ သေဆုံးသူ၃၃၂၆ ဦး၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီမှ သြဂုတ်လ အထိ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်စဉ် ၉၀၅၈ မှုဖြစ်ပွား ခဲ့ ပြီးဒဏ်ရာရရှိသူ ၁၅၆၇၅ ဦးရှိခဲ့ကာ သေဆုံးသူ ၂၄၃၇ ဦးရှိခဲ့ကြောင်း ယာဉ်ထိန်းရဲ တပ်ဖွဲ့မှုး ရုံးမှသိရသည်။
Newer GSM Sim Card စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
Older ရန်ကုန်မြို့ပတ် ”ဇ” အထူးရထား ပြေးဆွဲမည်
7 thoughts on “ယာဉ်တိုက်မူ ဖြစ်စဉ်များတွင် တိုက်ပြေး ယာဉ်မောင်းများ အမှုကျေအေးခွင့် မပြုတော့”
ဟိန္းလင္း ဦး says:
ရပ္ ေျဖရွင္း ယာဥ္ေမာင္းမ်ားလည္း ဝိုင္းဆြမ္းၾကီးေလာင္းၾကလို႔ ေသဖြယ္ရာ ရွိ
ရပ္ေျဖရွင္းတဲ့ယာဥ္ေမာင္း ဝိုင္းတြယ္လို႔ မနည္းထြက္ေျပးယူရတာလည္း ျမင္ဖူးေတာ့ ဘာေျပာရမွန္းေတာင္ သိေတာ့ဘူး
Ye Nyunt says:
မွန္လုိက္တာ HLO, ထစ္ကနဲဆုိ လက္ပါခ်င္လာႀကတာ ဒုိ႔ရဲ႕အယဥ္ေက်းဆံုးဆုိတဲ့လူမ်ဳိးေတြေလ ….
မ ေျပး လို႕ အ ရိုက္ ခံ ျပီးေသသြား ရင္ ေရာ ဘယ္သူ တာဝန္ယူမလဲ ဘာ ဥပေဒ နဲ႔ ကာကြယ္ေပးမွာလဲ ေျပာ!!!!!!!!
Sann Linn Sann Linn says:
အခု ဘယ္မွာ တိုက္လို့လည္း